အန်ကောဝပ် Angkok Wat အပိုင်း ၇ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » အန်ကောဝပ် Angkok Wat အပိုင်း ၇
အန်ကောဝပ် Angkok Wat အပိုင်း ၇
Posted by ဆူး on Jan 11, 2011 in Photography, Travel |9comments
ဆူး စိတ်ကူး အန်ကောဝပ်
ပင်မ အမွေအနှစ်ဆု ရထားတဲ့ အဆောက်အအုံကနေ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ထိုနယ်နမိတ်အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ တခြား အဆောက်အအုံ ပျက်တွေ သွားလေ့လာဖို့ လမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ထွက်တဲ့ လမ်းပေါ်မှာ တွေ့တဲ့ ဈေးသည်လေး မှတ်တမ်း တင်ယူခဲ့တယ်။
ကြာခွက်သည် ဖြစ်ပါတယ်။ ၃ခွက်ကို တစည်း စီးထားပြီးတော့ ၂စီးကို ၁ဒေါ်လာ တောင်းပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ ဆိုရင် ဈေးကြီးရင်တောင် တခွက် ၅၀ လောက်ဘဲ ရှိပါတယ် တွက်ကြည့်တော့ ၁၆၀ ၀န်းကျင်လောက် ကျပါတယ် ၀ယ်မစားဘဲ နေတာ သူများ ၀ယ်ကျွှေးလို့ တခွက် စားခဲ့တယ်။ တော်တော် ကို ချိုပါတယ်။ စားဖူးတဲ့ ကြာခွက်တွေထဲမှာ အချိုဆုံးလို့ ပြောရမှာဘဲ။ ဘာကွာလို့လဲတော့ မသိပါဘူး။ အစေ့အဆန်လည်း ကြီးပါတယ်။ စားကောင်းတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ လမ်းကြုံရင် ၀ယ်စားလိုက်ကြနော်။
အုတ်ရိုး တံတိုင်းတခုကို ဖြတ်ကျော်လာခဲ့ပါတယ်။ အမှန်တော့ ဖြတ်သွားတဲ့ နေရာ အရင်တုန်းက တံတိုင်းကြီး ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ တံတိုင်းအုတ်ရိုးတွေ ပြိုကျပြီး လမ်းဖြစ်နေတာပါ။
ထိုကဲ့သို့သော အုတ်တံတိုင်းများ နေရာတခုနဲ့ တခု ပိုင်းခြားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ပြုပြင်မွမ်းမံနေတဲ့ မျက်နှာ လေးခု ပုံ အဆောက်အအုံ ၀င်ပေါက် မုခ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
အုတ်တုံးတွေ ပြုတ်ထွက် မသွားအောင် သံကြိုးကြီးတွေနဲ့ စည်းထားပါတယ်။ ယာယီလား အမြဲ စည်းထားမလားတော့ မသိပါဘူး။
မျက်နှာလေးခုပုံ အဆောက်အဦး ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တော့ မေတ္တာ ဂရုဏာ မုဒိတာ ဥပေက္ခာ ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာ ၄ခုကို ရည်ညွန်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ထို မှနေတဆင့် ၀င်သွားရင်တော့.. ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ တောကြီးထဲမှာ နတ်ဆိုးတွေနဲ့ ချရတဲ့ အခန်းတွေ ရိုက်တဲ့ ရိုက်ကွင်း နမူနာ ယူထားတဲ့ နေရာကို ရောက်ပါတယ်။ ဆက်လက် တင်ပြပါအုန်းမည်။
တကယ့်ရှေးဟောင်းလက်ရာတွေပဲနော် … အခုလို တွေ့ရတာ ကျေးဇူးတင်တယ် …
တွက်ခြေမကိုက်ဘူး.. ပိုစ် တင်ရတာလည်း ခက်တယ်။ အကြံထုတ်ရမယ် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲလို့.. ဟီးဟီး..
ကျုပ်တို့ပုဂံဘုရားတွေကို အန်ကောဝပ်ဘုရားကျောင်းလို မထိန်းသိမ်းတာကို နှမြောလို့မဆုံးဘူး။ အခုတော့နောက်ကျသွားပါပြီ။ သမိုင်းယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကို လိုချင်သလို ပုံသွင်းမြင်တတ်တဲ့ စစ်တပ်လက်အောက်မှာ ကျရောက်ခဲ့တဲ့ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေရဲ့ ကံကြမ္မာလို့ပဲ ပြောရတော့မှာပဲ။ ဒါကြောင့်သက်သက်လွတ်စားကြပါလို့။
သစ်သားတွေကို ဖျက်စီးတာ.. ချ..
အုပ်ကျောက်တွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့..ပုထိုးစေတီတွေကိုဖျက်စီးတာ .. ညောင်ပင်..။ အဲဒီညောင်ပင်ပေါက်အောင် ညောင်စေ့သယ်လာတာက ..ငှက်..။
အဲဒီအသက်ရှိတဲ့အကောင်တွေ ..အရင်ရှင်းနိုင်ရင်.. အဲဒီနယ်ကရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေ .. ပိုကြာကြာခံတတ်တယ်..။
စာတွေ ဖတ်ရတာ ကြောင်နဲ့ ကြွက်စုပ် တပွဲ တလမ်း အကဲ စမ်းချင်နေကြပြီနဲ့ တူတယ်။ စိန်ခေါ်ပြီးရင်တော့ ဘွာမခတ်ကြေးနော်.. ဒီက လောင်းကြေးကြီးကြီး နဲ့ လောင်းချင်တဲ့ သူတွေ အတွက် ဒိုင်လုပ်ပေးမယ်။ လာကြဟေ့… ဒိုင်ဖွင်ပြီ… မပြိုင်ရင်တော့ ဒိုင်စားမယ်နော်။
ကျနော်တော့ ဒီတစ်သက်မရောက်နိုင်တော့ ဘူးထင်ပါရဲ့။
နောက်တစ်ခါသွားရင် အင်ဒိုက ဗောရော ဗုေ ဒ္ဓါ ကိုရောက်အောင်သွားနော်
အန်ကောဝပ် ပုံတွေ ရှိသေးတယ်.. ဒီနေ့ တင်ရမှာ ပျင်းလို့ မတင်သေးဘူး.. နောက်နေ့ မှ တင်မယ်။ ထူးခြားတဲ့ ပုံတွေ ရှိသေးတယ်။
Borobudur, or Barabudur, isa9th-century Mahayana Buddhist monument near Magelang, Central Java, Indonesia.
The ruins of Bagan cover an area of 16 square miles (41 km2). The majority of its buildings were built in the 11th century to 13th century,
Angkor Wat (Khmer: អង្គរវត្ត) isatemple complex at Angkor, Cambodia, built for the king Suryavarman II in the early 12th century as his state temple and capital city.
အင်ဒိုနီးရှားက အစောဆုံးပဲ..။ ၉ ရာစုဆိုတော့..။ အခုတော့ အစ္စလမ်မစ်နိုင်ငံ..။
ပုဂံက .. ၁၁-၁၃ ရာစု
အန်ကောဝပ်က .. ၁၂ရာစု ..
ရွှေမြန်မာတွေစွမ်းချက်က .. ရွှေတိဂုံ၊ ကျိုက်ထီးရိုး၊ ရွှေစက်တော်၊ မဟာမြတ်မုနိဘုရား တည်သမိုင်းတွေ ကို .. ဘီစီ ၅၀၀လောက်( ဂေါတမဘုရားပွင့်ချိန်)လုပ်ထားတာပဲ..။ အိန္ဒိယကလူတွေ.. ဆင်းတု၊ စေတီ တည်တတ်တာမှ .. အာသောကမင်းလက်ထက်လောက်မှဖြစ်တာ..။ အခုတော့ .. မြန်မာပြည်ဘုရား၊စေတီသမိုင်းကြည့်လိုက်..အကုန်လိုလို.. စိတ်ထင်ရာ..ပါးစပ်သမိုင်းအတည်လုပ်ရေးထားတာချည်းပဲ..။
ဆိုတော့.. အဲဒါတွေကို အတွင်းစိတ်က သိရဲ့သားနဲ့.. လက်ခံနေသူရော၊ ဆက်ဖြန့်ရေး-ပြောသူရော..။ မုသာဝါဒကံထိုက်နေတယ်..။
မုသာဝါဒါ- မဟုတ်မမှန်သောစကားကို ပြောဆိုခြင်းမှ၊ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ- ရှောင် ကြဉ်ရကြောင်း ကောင်းမြတ်သော သိက္ခာပုဒ်ကို၊
သမာဒိယာမိ- စိတ်၌ မြဲစွာဆောက်တည်ပါ၏။
ကမ္ဘာရွာခေတ်မှာ .. တခြားဘာသာဝင်တွေ အထင်သေးစရာဖြစ်တာပေါ့..။
ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာပြုနိုင်ဖို့ဝေးရော..ရှိတာလေးတွေ..အကုန်ပဲ့ ပဲ့ ပါကုန်ေ၇ာ..။
ကာဗွန်နဲ့ သက်တမ်းစမ်းသပ်တဲ့ ..စက်တလုံးယူပြီး ..အကုန်ပြန်စစ်ဆေးဖို့ကောင်းတယ်..။
လူကြီးတွေ သတ်သက်လွတ်စားတာ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးတွေကို အပတ်စဉ် ကြက်ကောင်လုံးကြော်တို့ ၊ ဘဲကင်တို့ ကျွေးရင်ပိုကောင်းမှာနော်။ ဒါတွေ မစားချင်တဲ့ကလေး တစ်ယောက်မှမရှိဘူး။ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ကလေးတွေ ပိန်ညောင်နေတာပဲ။ အရိုးပဲရှိတယ်။